ရပ်ထဲရွာထဲ လူတွေကြားထဲ အလှူခံတဲ့အဖွဲ့တွေ အပါအ၀င်အချို့ ဘုန်းဘုန်းများပါပြော ဟောနေတဲ့ စကားတခွန်းရှိပါတယ်
ဒါကတော့ မရှိလို့မလှူ မလှူလို့မရှိဆိုတာရယ်၊ (ဒါန နည်းလို့ မွဲတယ်) ဆိုတာလေးကို၊နဲနဲဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ်...........၊
လူရယ်လို့ဖြစ်လာတာ တော်ယုံတန်ယုံကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး မနုသတ္တဘာဝေါဒုလ္လဘောဆိုတဲ့အတိုင်း
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:00 AM No comments:
ထေရ၀ါဒ ဆိုသည့်စကားလုံး ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို ပြန်ကြည့်လျှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်တွင် ပြုလုပ်သော ဒုတိယ သင်္ဂါယနာတင်ပွဲမှ စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အတွင် ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မနှင့် ၀ိနယပေါ်တွင် မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ဖြည့်စွက်ကျင့်သုံးလိုသော ရဟန်းများ ပေါ်ပါက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပေါ်ပေါက်မှုကို အကြောင်းပြုပြီး ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာကျင့်ကြံလိုသည့် မထေရ်ကြီးများ၏ အလိုနှင့်အညီ အတည်ပြုလိုက်သည့် အယူအဆကို "ထေရ၀ါဒ" ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ နေ့စဉ်ကိစ္စ ငါးပါးမှာ==
၁။ ပုရေဘတ္တကိစ္စ = နံနက်ပိုင်း၌ ဆွမ်းခံကြွတော်မူခြင်း၊ အလှူရှင်တို့အား အခွင့်အားလျော်စွာ
၂။ ပ စ္ဆာဘတ္တကိစ္စ = နေလွဲအခါ ညပိုင်း၌ ပူဇော်ရန်လာကြသော ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတို့၏ အပူ
အရှင်ဘုရား သံဃာတော်တွေ လူထွက်သွားကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲလို့ ခဏခဏ လာမေးနေကြတဲ့ သူတွေအတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ မိန့်တော်မူခဲ့တာကို ဦးဇင်းဒေါက်တာကျမ်းစာအတွက် ရဟန်းတော်များနဲ့ဆိုင်ရာ ရှာဖွေရင်း ကျမ်း အထောက်အထားပါ တွေ့ရှိတာနဲ့ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေး။ ။အရှင်ဘုရား တစ်ခါက လူတစ်ယောက်က သူဟာ အနေကဇာတင်မှု မပြုလုပ်ရသေးတဲ့ ဆင်းတုတော်ကို သာမန်အရုပ်တစ်ခုလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သာမန်ရုပ်ထုတစ်ခုလို့ သဘောထားပြီး လှေခါးထစ် တစ်နေရာ၊ ဧည့်ခန်း၊ စတဲ့ နေရာတွေမှာ အလှကြည့်ဖို့ ထားထားတာပါ။ လို့ တပည့်တော်အား ပြောဖူးပါတယ်။ တပည့်တော်သိချင်တာက အနေကဇာမတင်ဘဲ ရုပ်ပွားတော်ကို ကိုးကွယ်သင့်/မသင့် ဆိုတာနဲ့ အနေကဇာမတင်သေးတဲ့ ဆင်းတုတော်များကို မသင့်တော်တဲ့ လှေခါးရင်းစတာတွေမှာ ထားသင့်/မသင့် ဆိုတာကို ဖြေကြားပေးတော် မူပါဘုရား။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:56 AM No comments:
၁။ သုတမယဉာဏ် = ဒိဋ္ဌိကွာကြောင်း ၀ိပဿနာတရားများကို အချိန်ရသလောက် နာကြားပါ။
(ဆရာတော်/ ဆရာကောင်း တရားနာခြင်း၊ ၀ိပဿနာစာအုပ် ဖတ်ခြင်း၊)
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဘာသာတရား ဆောင်ပုဒ်များ(၁)။
”ဣဓ မောဒတိ ပေစ္စ မောဒတိ၊
ကတပုညော ဥဘယတ္ထ မောဒတိ။ ။
သော မောဒတိ သော ပမောဒတိ၊
ဒိသွာ ကမ္မ၀ိသုဒ္ဓမတ္တနော”။ ။
ပရိယတ္တိ သာသနာ= ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမကို လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် သင်ကြားပေးခြင်း။
ပဋိပတ္တိ သာသနာ= သင်ယူ တတ်မြောက်ထားသည်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်း
ပဋိဝေဒ သာသနာ= ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့် ထိုကျင့်ကြံ အားထုတ်သူအတွက် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 12:21 PM No comments:
သီလ မှ နိဗ္ဗာန် သို့
ကိုယ်ကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာန်မှာ ၀ိပ္ပဋိသာရလို့ခေါ်တဲ့ နောင်တတစ်ဖန် ပူပန်ခြင်းသဘော၊ စိတ်နှလုံးမသာမယာဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိတော့ပါဘူး။
အ၀ိပ္ပဋိသာရလို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကြည်လင်ခြင်းသဘော၊ စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းသဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကြည်လင်ရွှင်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာန်မှာ ၀မ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ ပါမောဇ္ဇဖြစ်ပါတယ်။
တာဝတိံသာရှိ ဥယျာဉ်တော် (၅) ပါးမှာ==
၁။ နန္ဒ၀န် = တာဝတိံသာနတ်တို့၏ အလွန်နှစ်လို မြူးတူးရာ ဥယျာဉ်၊ မြို့၏ အရှေ့မျက်နှာ၌
၂။ ဖာရုသက = အသူရာတို့ကို ထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်အံ့ဟု ကြမ်းကြုပ်သောစကားကို ဆိုရာဥယျာဉ်၊
မြို့၏တောင်မျက်နှာ၌ ယူဇနာ (၇၀၀)။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:55 PM No comments:
လို့ မေးတော့ တစ်နေ့ ဆယ့်ငါးကျပ်လောက်တော့ ရတယ်၊ နှစ်ဆယ်လောက် ရတဲ့အခါ ရတယ်တဲ့။ ဒီတော့
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:50 PM No comments:
ဆရာတော် ဦးဇောတိက “တစိမ့်စိမ့်တွေးမယ်”
I have no parents. I make the heavens and earth my parents.
ငါ့မှာ မိဘမရှိပါဘူး။ ငါဟာ ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးကို (သဘာဝတရားကို) မိဘသဖွယ် လုပ်ထားပါတယ်။
I have no home. I make awareness my home.
ငါ့မှာ အိမ်မရှိပါဘူး။ ငါဟာ သတိကို အိမ်လုပ်ပြီးနေပါတယ်။
I have no life or death. I make the tides of breathing my life & death
ငါ့မှာ မွေးဖွားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။
၀င်လေ ထွက်လေကိုပဲ မွေးဖွားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းလို့ သဘောထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော ဒေါသရန်ငြိုး ဖြေဖျောက်နည်း
မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သည့် တရားတော်များအရ တဦးတယောက်အား အမျက်ဒေါသထွက်၍ ရန်ငြိုးများရှိခဲ့ပါလျှင် ထိုရန်ငြိုးဒေါသတရားတို့ကို တားဆီးနိုင်သောတရားမှာ မေတ္တာဓာတ်သာဖြစ်သည်ဟု ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ရန်ငြိုးရန်စဖြေဖျောက်နည်း (၁၁)နည်း ...
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား။ ဘုရားမှာ တင်ထားတဲ့ သစ်သီးကိုကျ တော့ လူတွေစားကြတယ်။ ပန်းကျတော့ လူတွေပြန်မသုံး ရဘူးလို့ ပြောကြတယ်ဘုရား။ အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ သိချင်လို့ပါ ဘုရား။ နောက်ပြီး ငရဲကြီးတယ် ဆိုတာမျိုးရောရှိလားဘုရား။ အဲဒါလေးေ
ဖြေ။ ။ တကယ်တော့ ပန်းကိုလည်း မပန်သင့်ဘူး သစ်သီးလည်း ပြန်မယူသင့်ပါဘူး။ လှူတဲ့လူဆိုရင် ပိုတောင် မယူသင့်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လှူတဲ့လူက မုတ္တစာဂီ-တွယ်တာတပ်မက် တွန့်တိုမှုမရှိဘဲ လွတ်လွတ်စွန့်ကြဲပြီးသား ဖြစ်လို့ပါ။ ဆွမ်းတော် တင်တယ်၊ သောက်တော်ရေကပ်တယ်၊ သစ်သီးဝလံ လှူတယ်ဆိုတာ မိမိက သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကို တကယ်ကြည်ညိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင် ကိုယ်စား ရုပ်ပွားတော်ကို ကပ်လှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလှူပြီဆိုကတည်းက သက်တော်ထင်ရှားဘုရားကို အာရုံပြုပြီး လှူထားသည့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မိမိပြန်ယူဖို့ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါပေ။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:46 AM No comments:
၀ိရိယလွန်ကဲတဲ့သူကတော့ သေသေကြေကြေ အားထုတ်လိုက်မယ်၊ ကျန်တာတွေ ဖြစ်
ချင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးပါ။ အပြင်းအထန် အားထုတ်ရှုမှတ်နေပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာ
ချွေးဒီးဒီးကျမယ် စိတ်ကတော့ အပြင်အာရုံတွေပေါ်မှာ ပျံ့လွင့်နေတတ်ပါတယ်။
၀ိပဿနာ အားထုတ်နည်း အခြေခံ ဆောင်ပုဒ်လေးများ။